Samsung Health mar dambe la jaanqaadi mayso Android 7.0 | Androidsis
Codsiyada waxay leeyihiin meerto nololeed oo kuxiran nidaamka qalliinka halka laga maamulo, maxaa yeelay waa midka ay ka faa'iideystaan ​​howlaha cusub ee ay bixin karaan. Maaddaama codsi uu ku daro shaqooyin cusub oo kuxiran nidaamka qalliinka, wuu yareynta iswaafajinta gadaal.
Ma awoodo inay soo bandhigto howlo cusub oo ku saleysan noocyadii ugu dambeeyay ee nidaamka qalliinka, ma oggolaan doonaan in lagu daro shaqooyin, sidaa darteed ikhtiyaarka ugu macquulsan ayaa ah in la joojiyo taageerada loo fidinayo nidaamyada hawlgalka ee duugoobay Samsung Health ayaa ka mid noqon doonta barnaamijyadan sida ay tabisay Samsung.
Laga soo bilaabo Maarso 22, 2021, Samsung waxay xaqiijisay in cusbooneysiinta xigta ee codsiga si loola socdo caafimaadka iyo dhaqdhaqaaqa jirka mar dambe la jaan qaadi mayso dhammaan aaladaha ay hadda gacanta ku hayaan Android 7.0 Nougat ama qoraalkii hore.
Codsiga wuu sii shaqeyn doonaa
Tani macnaheedu maaha in dalabku shaqeynayo habeen, laakiin kama heli doonno cusbooneysiinta Samsung mar kale, sidaa darteed ma jiri doonaan warar iyo adeegyo ay shirkaddu ku dari karto cusboonaysiinta soo socota ee barnaamijka Samsung Health ee qalabka ay maamusho Android 8.0 ee soo socda.
Si aad uga faa iideysato arjiga, shirkadda ayaa kugula talinaysa isticmaal ugu yaraan hal qalab oo ay maamusho Android 8.o Oreo ama ka sareeya, nooca ugu yar ee Android illaa Maarso 22, 2021 si loo sii wado isticmaalka dhammaan astaamaha hadda iyo mustaqbalka ee barnaamijka Samsung Health.
Android 7 waxaa laga bilaabay suuqa 5 sano ka hor, si kastaba ha noqotee, inbadan waxay ahaayeen boosteejooyin ka yimid Shiinaha sanadihii dambe ayaa sii waday in ay suuqa la gaaraan noocaan. Haddii aad ka iibsatay taleefankaaga gacanta Shiinaha oo aad wali isticmaaleyso, waxay u badan tahay in la gaadhay waqtigii loo cusboonaysiin lahaa eraybixin casri ah, gaar ahaan haddii aad isticmaasho jijin cabiran ama Samsung smartwtach.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Samsung Health mar dambe la jaanqaadi mayso Android 7.0
Sida loo daro marin u helka xiriirka Telegram-ka desktop-ka: ku cusub 7.5.0 oo leh farriimo si otomaatig ah loo tirtiro